ယောက်ျားလေးတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော မိန်းကလေးတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများ - Barnyar Barnyar
ယောက်ျားလေးတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော မိန်းကလေးတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများ
May 2, 2022 linn htet အလှအပရေးရာ 0
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဆွဲဆာင်မှု ရှိ မရှိဆိုတာကို တစ်ချို့က အဲဒီမိန်းကလေးရဲ့ တင်သားတွေ၊ ရင်သားတွေ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိ၊ မရှိဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ လိုက်ပြီး တိုင်းတာကြတယ်။ မှန်သင့်သလောက်တော့ မှန်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအစိတ်အပိုင်းတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တကယ်တမ်း စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ တစ်ချို့ အလုံးအပေါက် ကြီးကြီးနဲ့ မိန်းကလေးတွေ ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် လှသလို ထင်ရပေမယ့် သေချာကြည့်လိုက်ရင် မလှတော့ဘူး။
တစ်ချို့ကျတော့ ရုတ်တရက်ဆို မလှဘူး ထင်ရပေမယ့် တစ်စိမ့်စိမ့် ကြည့်လေလေ၊ ပိုပြီး လှလာလေလေပဲ အကြည့်ခံတယ်ပေါ့ ။ တစ်ကိုယ်လုံး ခြုံကြည့်ရင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပိုလှအောင် ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သိသလောက် ပြောရမယ် ဆိုရင်
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အလှတွေထဲမှာ လက်မောင်းလေးတွေလည်း အပါအဝင်ပါ ။ သွယ်သွယ် ( ဒါမှမဟုတ် ) ခပ်ပြည့်ပြည့် လက်မောင်းလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ လက်ပြတ်အင်္ကျီလေးတွေ ဝတ်လိုက်တဲ့အခါ ပိုပြီးစွဲဆောင်မှု ရှိသွား တတ်ကြတယ် ။
အထူးတလည် ပြောနေစရာ မလိုတဲ့ အချက်ပါ ။ သွားတက်လေးတွေ ပေါ်အောင် ရယ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဟာ မလှရင်တောင် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး အမျိုးအစားထဲ ပါတတ်ကြတယ် ။
နောက်တစ် ချက်ကတော့ ပါးချိုင့်လေးတွေ ပါပဲ ။ ဆံပင်ရှည်ရှည်၊ မြန်မာဆန်ဆန် ရင်ဖုံးလေးဝတ်ပြီး ပြုံးလိုက်တိုင်း ပါးချိုင့်လေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက် ဟာ ယောကျာ်းလေးတွေရဲ့ စိတ်ကူးထဲက မင်းသမီးလေး တစ်ပါးပါပဲ ။
ရှေးစာဆိုတွေ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ အလှအပစံတွေထဲ ဝိုင်းစက်စက် မျက်လုံးလေးတွေလည်း အပါအဝင်ပါ။ မျက်လုံးဟာ စိတ်ရဲ့ ထွက်ပေါက် ဆိုသလို၊ စိတ်ထဲက ခံစားချက် မှန်သမျှဟာ မျက်လုံးမှာ ပေါ်နေတတ်တယ်။ ဝိုင်းစက်ပြီး ရွှန်းလဲ့နေတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံ အောက်မှာ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ ကျရှုံးဖူးတယ် မဟုတ်လား ?
( ၅ ) အနက်ရောင် ဆံပင်ရှည်ရှည်လေး
ဆံပင်ဒီဇိုင်းတွေ ဘယ်လို ပြောင်းလာလာ၊ ဆံပင်တွေကို ဘယ်လို ကာလာတွေပဲ ဆိုးဆိုး၊ နက်မှောင်ပြီး ပျော့အိနေတဲ့ ဆံပင်ရှည်လေးတွေကို ပိုပြီး နှစ်သက်တတ် တယ်ဆိုတာ ဝန်ခံလိုက်ပါ။
မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်း အဲဒီလို နက်မှောင်ညရှည်လျားတဲ့ ဆံနွယ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ မြတ်နိုးတတ်ကြပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး မိန်းကလေးတွေထဲမှာ နက်မှောင်တဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပိုပြီး ထင်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာ ငြင်းမရဘူးလေ ။
( ၆ ) ခါးသိမ်သိမ်လေး
မြန်မာဝတ်စုံလေး ဝတ်လိုက်တိုင်း ခါးသိမ် သိမ်လေးဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ စက္ကန့်တော်တော်လေး ကြာအောင် ငေးမောကြည့် တတ်ကြတယ် ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းတဲ့ အလှအပစံတွေထဲမှာ သေးသွယ်သွယ်ခါးလေး တစ်စုံလည်း အပါအဝင်ပါပဲနော် ။
(၇) သွယ်လျလျနဲ့ ခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးများ
မိန်းကလေး တော်တော်များများရဲ့ လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်းလေးတွေက သွယ်လျလျနဲ့ လှလှလေးတွေ များကြပါတယ်။ သွယ်လျပြီး သန့်ရှင်းနေတဲ့ ခြေချောင်း၊ လက်ချောင်းလေးတွေဟာလည်း သူတို့ရဲ့ အလှကို နောက် level တစ်ဆင့် ရောက်သွားစေတဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ ။
(၈) နှုတ်ခမ်း ဖူးဖူးလေးတွေ
နှုတ်ခမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလှအပဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ အများကြီးမို့လို့ အနည်းနဲ့အများတော့ ဝိဝါဒ ကွဲနိုင်တယ်။ တစ်ချို့တွေက နှုတ်ခမ်းပါးပါးနဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အလှဆုံးလို့ ထင်ကြတယ် ။
ကျွန်တော်ကတော့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူး ( ထော်ထော် )နဲ့ မိန်းကလေးတွေက ပိုပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ပါမယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး ဘာကို အလိုမကျ ဖြစ်နေမှန်း မသိတဲ့ ပုံလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်လေ ။
အလှအပနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြင်သလောက်ကတော့ အဲ့ဒီလောက်ပါပဲ။ ထပ်မံပြီး ဖြည့်စွက်ချင်လည်း ရပါသေးတယ်။ တစ်ခုရှိတာက အပေါ်က အချက်တွေ အကုန်လုံး ( ဒါမှမဟုတ် ) တစ်ချို့တစ်ဝက်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ
အထက်တန်းကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝက ယောက်ျားလေးတို့ရင်ထဲမှာ အတော်ကြာကြာ နေရာယူခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် ကျိန်းသေပေါက် ပြောလို့ရပါရဲ့ ။ Credit – WE.Com
ယောကျြားလေးတှကေို ဆှဲဆောငျနိုငျသော မိနျးကလေးတို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျး မြား
မိနျးကလေးတဈယောကျ ဆှဲဆာငျမှု ရှိ မရှိဆိုတာကို တဈခြို့က အဲဒီမိနျးကလေးရဲ့ တငျသားတှေ၊ ရငျသားတှေ ဖှံ့ဖွိုးမှု ရှိ၊ မရှိဆိုတဲ့ အခကျြနဲ့ လိုကျပွီး တိုငျးတာကွတယျ။ မှနျသငျ့သလောကျတော့ မှနျပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အဲဒီအစိတျအပိုငျးတှကေ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ တကယျတမျး စှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှတေော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ တဈခြို့ အလုံးအပေါကျ ကွီးကွီးနဲ့ မိနျးကလေးတှေ ရုတျတရကျ ကွညျ့ရငျ လှသလို ထငျရပမေယျ့ သခြောကွညျ့လိုကျရငျ မလှတော့ဘူး။
တဈခြို့ကတြော့ ရုတျတရကျဆို မလှဘူး ထငျရပမေယျ့ တဈစိမျ့စိမျ့ ကွညျ့လလေေ၊ ပိုပွီး လှလာလလေပေဲ အကွညျ့ခံတယျပေါ့ ။ တဈကိုယျလုံး ခွုံကွညျ့ရငျ မိနျးကလေးတဈယောကျကို ပိုလှအောငျ ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ အစိတျအပိုငျးလေးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ သိသလောကျ ပွောရမယျ ဆိုရငျ
မိနျးကလေး တဈယောကျရဲ့ အလှတှထေဲမှာ လကျမောငျးလေးတှလေညျး အပါအဝငျပါ ။ သှယျသှယျ ( ဒါမှမဟုတျ ) ခပျပွညျ့ပွညျ့ လကျမောငျးလေးတှေ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မိနျးကလေးတှဟော လကျပွတျအင်ျကြီလေးတှေ ဝတျလိုကျတဲ့အခါ ပိုပွီးစှဲဆောငျမှု ရှိသှား တတျကွတယျ ။
အထူးတလညျ ပွောနစေရာ မလိုတဲ့ အခကျြပါ ။ သှားတကျလေးတှေ ပျေါအောငျ ရယျတတျတဲ့ ကောငျမလေး တဈယောကျဟာ မလှရငျတောငျ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ မိနျးကလေး အမြိုးအစားထဲ ပါတတျကွတယျ ။
နောကျတဈ ခကျြကတော့ ပါးခြိုငျ့လေးတှေ ပါပဲ ။ ဆံပငျရှညျရှညျ၊ မွနျမာဆနျဆနျ ရငျဖုံးလေးဝတျပွီး ပွုံးလိုကျတိုငျး ပါးခြိုငျ့လေးတှပေျေါလာတတျတဲ့ ကောငျမလေး တဈယောကျ ဟာ ယောကျြားလေးတှရေဲ့ စိတျကူးထဲက မငျးသမီးလေး တဈပါးပါပဲ ။
ရှေးစာဆိုတှေ သတျမှတျထားကွတဲ့ အလှအပစံတှထေဲ ဝိုငျးစကျစကျ မကျြလုံးလေးတှလေညျး အပါအဝငျပါ။ မကျြလုံးဟာ စိတျရဲ့ ထှကျပေါကျ ဆိုသလို၊ စိတျထဲက ခံစားခကျြ မှနျသမြှဟာ မကျြလုံးမှာ ပျေါနတေတျတယျ။ ဝိုငျးစကျပွီး ရှနျးလဲ့နတေဲ့ မကျြဝနျးတဈစုံ အောကျမှာ တဈခါတဈလေ ကြှနျတျောတို့ ကရြှုံးဖူးတယျ မဟုတျလား ?
( ၅ ) အနကျရောငျ ဆံပငျရှညျရှညျလေး
ဆံပငျဒီဇိုငျးတှေ ဘယျလို ပွောငျးလာလာ၊ ဆံပငျတှကေို ဘယျလို ကာလာတှပေဲ ဆိုးဆိုး၊ နကျမှောငျပွီး ပြော့အိနတေဲ့ ဆံပငျရှညျလေးတှကေို ပိုပွီး နှဈသကျတတျ တယျဆိုတာ ဝနျခံလိုကျပါ။
မွနျမာလူမြိုး ဖွဈနတောကွောငျ့လညျး အဲဒီလို နကျမှောငျညရှညျလြားတဲ့ ဆံနှယျတှကေို ကြှနျတျောတို့ မွတျနိုးတတျကွပါသေးတယျ။ နောကျပွီး မိနျးကလေးတှထေဲမှာ နကျမှောငျတဲ့ ဆံနှယျရှညျကွီးတှနေဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျက ပိုပွီး ထငျပျေါနတေယျဆိုတာ ငွငျးမရဘူးလေ ။
မွနျမာဝတျစုံလေး ဝတျလိုကျတိုငျး ခါးသိမျ သိမျလေးဖွဈနတေဲ့ ကောငျမလေးတှကေို ကြှနျတျောတို့ စက်ကနျ့တျောတျောလေး ကွာအောငျ ငေးမောကွညျ့ တတျကွတယျ ။ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ စှဲဆောငျမှု ရှိလှနျးတဲ့ အလှအပစံတှထေဲမှာ သေးသှယျသှယျခါးလေး တဈစုံလညျး အပါအဝငျပါပဲနျော ။
(၇) သှယျလလြနြဲ့ ခွခြေောငျးလကျခြောငျးလေးမြား
မိနျးကလေး တျောတျောမြားမြားရဲ့ လကျခြောငျး၊ ခွခြေောငျးလေးတှကေ သှယျလလြနြဲ့ လှလှလေးတှေ မြားကွပါတယျ။ သှယျလပြွီး သနျ့ရှငျးနတေဲ့ ခွခြေောငျး၊ လကျခြောငျးလေးတှဟောလညျး သူတို့ရဲ့ အလှကို နောကျ level တဈဆငျ့ ရောကျသှားစတေဲ့ အခကျြတဈခုပါပဲ ။
(၈) နှုတျခမျး ဖူးဖူးလေးတှေ
နှုတျခမျးနဲ့ ပတျသကျပွီး အလှအပဆိုငျရာ သတျမှတျခကျြတှကေတော့ အမြားကွီးမို့လို့ အနညျးနဲ့အမြားတော့ ဝိဝါဒ ကှဲနိုငျတယျ။ တဈခြို့တှကေ နှုတျခမျးပါးပါးနဲ့ မိနျးကလေးတှကေို အလှဆုံးလို့ ထငျကွတယျ ။
ကြှနျတျောကတော့ နှုတျခမျးဖူးဖူး ( ထျောထျော )နဲ့ မိနျးကလေးတှကေ ပိုပွီး ခဈြဖို့ကောငျးတယျလို့ သတျမှတျပါမယျ။ နှုတျခမျးလေးစူပွီး ဘာကို အလိုမကြ ဖွဈနမှေနျး မသိတဲ့ ပုံလေးက အရမျးခဈြဖို့ ကောငျးတယျလေ ။
အလှအပနဲ့ ပတျသကျလို့ မွငျသလောကျကတော့ အဲ့ဒီလောကျပါပဲ။ ထပျမံပွီး ဖွညျ့စှကျခငျြလညျး ရပါသေးတယျ။ တဈခုရှိတာက အပျေါက အခကျြတှေ အကုနျလုံး ( ဒါမှမဟုတျ ) တဈခြို့တဈဝကျနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျဟာ
အထကျတနျးကြောငျး၊ တက်ကသိုလျကြောငျးသားဘဝက ယောကျြားလေးတို့ရငျထဲမှာ အတျောကွာကွာ နရောယူခဲ့ဖူးတယျ ဆိုတာတော့ ကြှနျတျော ကြိနျးသပေေါကျ ပွောလို့ရပါရဲ့ ။ Credit – WE.Com
ချိုင်းနံ့ပြင်းလို့ စိတ်ညစ်နေလား ချိုင်းချွေးထွက်ရင် အနံ့ပြင်းသူများအတွက် (ချိုင်းချွေးနံ့)ပျောက်နည်း
မေလ ၇ရက်နေ့မှ ၁၀ရက်နေ့အတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်းတစ်လုံး ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ မင်းဂွတ်သီးလေးခန့်မှန်း